China Drum karazana mitifitra milina fipoahana orinasa sy ny mpanamboatra | TAA
Ao amin'ny Masinina fipoahana voatifitra karazana amponga ny sombin'asa kely dia nopotehina toy ny entana betsaka. Noho izany dia azo ampiasaina amin'ny tsipika famokarana izy ireo na amin'ny configurations irery.
Tombony amin'ny milina fipoahana amponga
Teknolojia fanapoahana azo itokisana: Masinina nipoaka ny balaamboarina amina karazana, karazany ary habe maro samihafa. Kambana izy ireo ary dian-tongotra kely dia kely fotsiny. Ny throughput mitohy dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo masinina maro.
Layout mahasoa amin'ny fikojakojana:Ny fikojakojana tsy tapaka dia zava-dehibe amin'ny fitehirizana ny sandan'ny fitaovana maharitra. Ny varavarana lehibe sy serivisy fanaraha-maso dia manome fidirana mora amin'ireo singa manan-danja rehetra. Vokatr'izany dia azo soloina mora foana ny faritra anaovana.
Teknolojia sivana vaovao:Ny rafitra sivana manavao dia mahavariana amin'ny fahombiazana avo lenta. Ny toetra mampiavaka azy manokana dia ny cartridges sivana conical izay azo soloina haingana sy haingana ivelan'ny masinina noho ny fivelaran'izy ireo. Ireo rafitra sivana miorina amin'ny cartridge ireo dia azo averina na dia ireo milina fipoahana tranainy efa ho an'ny mpamokatra hafa rehetra aza.
Tetikasa matanjaka: Ny endriny matanjaka vita amin'ny vy tsy mahazaka akanjo miaraka amin'ny faritra fanampiny miharihary amin'ny akanjo dia manohana ny mpandraharaha hiaro azy fampiasam-bola.
* Nihena be ny isan'ireo akanjo anaovana (raha oharina amin'ny milina fipoahana fehikibo vy) noho ny toetra manokana ananan'ny amponga.
* Ny fihetsiketsehana malefaka mihetsiketsika sy ny fihodinan'ny amponga dia manome ny fitsaboana malefaka an'ireo faritra.
* Ny famolavolana amponga dia miankina amin'ny ampahany tokony ho tsaboina.
Ny endrika sy ny famolavolana ny faritra ambany sy ny rindrina an-daniny dia miantoka ny fikororohana tsara indrindra an'ireo faritra.
* Ny perforation'ny amponga dia tsapa mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny specififi c momba ireo ampahany ary ilay masiaka. Manakana ny fitohanana izany, ary azo esorina amin'ny fomba tsara ny abrasive.
* Ny milina fipoahana amponga amponga dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ireo ampahany kely novokarina.
Masinina nipoaka ny bala misy amin'ireto habe mahazatra manaraka ireto:
Famaritana ara-teknika TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500
Boky amponga (1)
Turbine avo lenta (habetsahana)
Turbine avo lenta (kW)
7.5 hatramin'ny 15 hatramin'ny 22 hatramin'ny 30
Fampitana mampijaly visy visy visy visy
Sehatra fikojakojana TSY ENY ENY ENY
Fitaovana sivana cartridge PF4-06 PF4-06 PF4-09 PF4-12
Ny fanampiny sy ny endri-javatra hafa dia azo atao.
Teo aloha: Fitotoana kodiarana FW-09 andiany
Manaraka: Tifitra vy notapahana vy vy
Milina fanapoahana tifitra mandeha ho azy
milina fipoahana karazana Drum
Shina Blasting Machine
Milina fanapoahana bala
Ao amin'ny Masinina Fipoahana Drum Shot
Roller conveyor nitifitra milina fipoahana
Tombontsoa manandanja AGTOS teknolojia fipoahana: ny turbines-tsika dia herinaratra matanjaka izay lafo vidy tokoa noho ny ampahany kely amin'ny akanjo ary flfl ow mahery abrasive. Mora ny mitazona Ny teknolojia fanivanana vaovao dia mandresy lahatra amin'ny alàlan'ny fampisehoana matanjaka. Automation Famafazana flfl ame voapaika tapa-harona Blasting mach ...
Misy fitaovam-piarovana tsy misy atiny Votoatin'ny Cr-12%, 20%, 25% na fangatahana. Ny vokatra dia manasongadina ny fizotran'ny teknolojia mandroso sy siantifika. Fahombiazana avo lenta ary mandeha ho azy ny tsipika famokarana maina. Famborana chromium avo lenta manokana manaparitaka vy, manamboatra banga ao amin'ny indostrialy anatiny. Misy ny ampahany Original Equipment Manufactured (OEM). Manolotra ...
Ny kodiarana fipoahana avo lenta TAA dia nanaporofo ny tenany ho matanjaka, mahomby amin'ny lafiny toekarena ary mora ampiasaina. Izy ireo dia misy diametera kodiarana turbine isan-karazany ary karazana kojakoja fitehirizana sy fitafiana (ohatra vy mafy). TAA kodiarana fipoahana avo lenta dia malaza amin'ny fanavaozana ny milina fanapoahana baomba mahazatra koa. Fanehoana ny vokatra Manatsara ny hafainganam-pandehan'ny fitifirana mazava ho azy fa tsara fanoherana ny fitafiana mampihena ny fihinanana angovo ...
Masinina mipoaka mitifitra Overhead Rail
Tombony azo avy amin'ny milina fanapoahana tifitra làlana * Teknolojia fanapoahana azo itokisana: azo antoka tokoa ireo singa turbine avo lenta vitantsika. Izy ireo dia tena mahomby noho ny fahabetsahan'ny isan'ny mitafy, ny fikolokoloana ny fikolokoloana ary ny tahan'ny fikorianan'ny rano malemy. * Fikolokoloana ambany: Ny fikojakojana tsy tapaka dia manampy amin'ny fitazonana ny sandan'ny masinina. Ny varavarana fikojakojana lehibe dia manome fidirana mora amin'ny singa ilaina rehetra ary manamora ny famerenana haingana ...
Ny tombony azo avy amin'ny fehin-kibo AGTOS milina fipoahana fipoahana azo antoka Teknolojia fanapoahana Teknolojia sivana fanavaozana maro samihafa Fitaovana automatique amin'ny alàlan'ny firindrana amin'ny rafitra fitaterana an-trano. Turbine avo lenta AGTOS: milina matevina ary voaorina tsara ny turbinay. Noho ny ampahany kely amin'ny akanjo sy ny vokatra avo lenta dia miasa ara-toekarena tanteraka izy ireo. Betsaka d ...
Toy ny fitsipika, ny masinina karazana fantsona karazana hanger dia atolotra na ho an'ny fanodinana mitohy. Na izany aza, maro ireo endrika afovoany izay mifantoka amin'ny karazana rafitra mpampita hafatra ambony. Amin'ny tranga maro, ny dingana samihafa toy ny fanapoahana, ny fandokoana ary ny fanamainana manaraka dia azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny rafitra mpampita. Izany dia ahafahanao mikitika potika goavambe ho an'ny streamlining ny fizotran'ny asa. Fomba fanodinana fanampiny ...